Al-Shabaab oo 700 oo neef ka rabta dadka Ceeldheer. - Wargeyska Faafiye
Al-Shabaab oo 700 oo neef ka rabta dadka Ceeldheer.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay amar ku siisay dadka ku nool degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud inay muddo saddex toddobaad ah ku soo ururiyaan 700 oo neef oo ay maleeshiyadu u adeegsato dagaallada.
Dadka deegaanka qaarkood oo la hadlay Bar-kulan ayaa ka cabanaya inaysan awoodin xoolahaas inay bixiyaan, waxayna tilmaameen inay ka walwalsan yihiin inay Al-Shabaab xoog uga wada qaadato xoolahooda haddii ay amarka u hoggaansami waayaan.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ayay ka codsadeen inay soo gaaraan degmada Ceeldheer si ay uga badbaadiyaan dhibaatada ay ku hayso Al-Shabaab.
Dhowr bilood ka hor ayay Al-Shabaab dadka deegaanka si khasab ah uga qaadday lacag gaareysa 100 kun oo doollar.
Filed in: .Warka Tags: Sidebar Right News Ticker
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsSomalia unversities up their game.Xaaladda Kismaayo — war bixin.Maxkamada ciidanka oo xukun ridayLabo kunteenar oo khamri ah oo lagu bur buriyay Muqdisho kaddibna la aas + VIDEO”NATO fails to rescue Libyan migrant boat